7 Waxyaabaha Lagu Beddeli Karo WhatsApp Si Isku Mid Ah Wanaagsan Ama Ka Wanaagsan | Wararka Gadget
7 beddelka WhatsApp ayaa si siman u wanaagsan ama ka fiican
Facebook waqti ka hor wuxuu go'aansaday inuu sameeyo maalgashi adag iibsashada WhatsApp, sidaas noqoshada codsiga fariimaha deg dega ah ee leh tirada ugu badan ee isticmaaleyaasha adduunka oo dhan iyo shaki la'aan kan ugu caansan. Markii hore ma aysan fulin midowga labada codsi, sidii loo fikiray ama la isku dayay in waxtar looga helo shabakadda bulshada ee caanka ah.
Si kastaba ha noqotee, dhowr toddobaad WhatsApp ayaa ka codsaday oggolaansho adeegsadayaasheeda si ay ula wadaagaan xogta Facebook. Tani maalmo ayey noqotey waajibaad in la sii wado isticmaalka farriinta deg degga ah. Maaddaama aynaan ahayn inaynu dhex marno sariirta iyo wixii ka sarreeya oo dhan ma dooneyno in xogteenna gaarka ah lala wadaago codsiyada, maanta waxaan ku tusi doonnaa 7 beddelka WhatsApp ayaa si siman u fiican ama xitaa ka fiican codsiga caanka ah.
Way adag tahay in la ogaado sida ay arrintani ku dhammaan doonto waana in WhatsApp ay waayi karto boqollaal kun oo isticmaaleyaal ah haddii ay weli ku sii adkaanayso inay la wadaagto, haa ama haa, xogta gaarka ah ee isticmaaleyaasha leh Facebook, iyadoon sidoo kale si fiican loo sharxin waxa ay u socdaan in lala sameeyo. Kiiskeyga, uguma talagalin in aan cid u idmo si aan ula wadaago xogteyda shaqsiyadeed, aniga oo aan ogeyn waxa laga yeelayo iyo sida loo isticmaali doono, sidaa darteed waxaad horeyba u go'aansatay inaad bilowdo adeegsiga barnaamijyo kale ama fariin deg deg ah oo kale. Haddii aniga oo kale aad qaadatay go'aankan, waa kuwan dhawr ka beddelan WhatsApp.
8 Fikradda si xor ah
Mid ka mid ah waxyaabaha kale ee lagu beddeli karo WhatsApp ee leh taageerada adeegsadayaasha, oo sii kordhaya waqti ka dib, ayaa ah telegraam. Waana in barnaamijkan fariimaha degdega ah uu ogyahay sida loogu bandhigo dadka isticmaala sida saxda ah wixii ay u baahnaayeen, iyada oo aan lagu mashquulin waxyaabo qarsoon ama qariib ah.
Haddii ay tahay inaan ka istaagno Telegram shaki la’aan waa kan amniga la siiyay adeegsadaha iyo xawaaraha. Intaa waxaa dheer, suurtagalnimada in la diro sawirro iyada oo aan hoos loo dhigin tayadooda, istiikarada ama hadiyadaha iyo wixii ka sarreeya dhammaan suurtagalnimada in lagu sameeyo wadahadal qarsoodi ah isticmaaleyaasha kale, halkaas oo dhammaan macluumaadka la qariyey iyo sidoo kale is-dumin waqti ka dib oo aan xakamayn karno dhadhankeena.
Haddii aadan wali isku dayin Telegram, waxaad lumineysaa waqtigaaga iyo kadib markaad sameyso, waxaa suuragal ah inaadan xasuusan waxa WhatsApp yahay ama faa iidadiisa.
Ficil ahaan maadaama WhatsApp laga heli karo suuqa sidoo kale waa sidoo kale Line. Guusha ay ka gaadhay dalalka qaar waxay la mid tahay ta codsi fariin deg deg ah oo ay leedahay shirkadda Facebook, in kasta oo dalal kale gabi ahaanba aan laga warqabin.
Of Line waxaan dhihi karnaa taas Waa beddel xiiso leh, oo leh interface yar oo kala duwan, shaqooyin iyo xulashooyin, oo leh taabasho Aasiya ah. Faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah suurtagalnimada in la sameeyo wicitaannada VoIP ama lagu raaxeysto adeegga iyada oo loo marayo kombiyuutarka iyada oo ay ugu wacan tahay nooca PC-ga.
Nasiib darrose, in kasta oo ay xaqiiqda tahay in Line-ka uu na siinayo xoogaa faa'iidooyin ah iyo waxyaabo xiiso leh, gudaha Isbaanishka, tusaale ahaan, isticmaalkeedu aad ayuu u yar yahay, taas oo macnaheedu noqon doono in adeegsadayaal badan aysan ahayn beddel dhab ah oo WhatsApp mooyaane haddii ay asxaabtooda iyo qoyskooda ku qanciyaan bilaabaan inay isticmaalaan hadda.
LINE: Wac oo qoraal ah
Developer: Shirkadda LINE
Mid ka mid ah dhinacyada sida adag noogu qancinaya WhatsApp waa asturnaanta ay na siiso iyo gaar ahaan maalmahaan dambe waxa ay ku sameyso xogtayada gaarka ah. Haddii walaacaagu sarreeyo, beddel weyn ayaa noqon kara Signal, kaas oo haysta oggolaanshaha Edward Snowden.
Faa'iidooyinka ay bixiso barnaamijkan fariimaha degdegga ah ee aadka loo ilaaliyo waxaa ka mid ah sirta dhammaan fariimaha, suurtagalnimada in fariimaha qaarkood lagu xirayo lambarka sirta ah ama lagu xakameeyo shaashadaha.
Signal ka sokow sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameyso wicitaano cod ah, sida ku dhacda codsiyo kale oo badan oo nuucaan ah, in kasta oo xiisaha xiisaha leh ee dhawaqooda sidoo kale la kaydinayo, sida xaalku yahay fariimaha oo dhan.
In kasta oo xilliyadii ugu dambeeyay Google ay isku dayeyso inay ka dhex muuqato suuqa tartanka loogu talagalay codsiyada farriimaha degdegga ah ee lala socdo Google Allo, haddana waxay horey u leedahay codsi heer sare ah oo noocan ah oo maanta la heli karo; tagi.
Laga yaabee inaannan awoodin inaan qadarino sida ay uguqalantay adeeggan shirkada weyn ee raadinta, taas oo na siisa suurtagalnimada in la diro oo la helo farriimo, laakiin sidoo kale in la sameeyo wicitaanno cod iyo wicitaanno fiidiyoow ah, oo leh tayo aad u wanaagsan labada xaaladoodba. Si kastaba ha noqotee, guusheedii ma noqon sidii la filayay in kasta oo xaqiiqda ah in loo isticmaali karo ficil ahaan dhammaan barnaamijyada moobiilka iyo sidoo kale nooca desktop-ka.
Google ayaa isku dayi doonta markale Google Allo, inkasta oo laga yaabo inaad ka fiirsato kor u qaadista Hangouts markale, maxaa yeelay shaki la'aan waa mid ka mid ah codsiyada fariimaha degdegga ah ee ugu fiican suuqa iyo beddel dhab ah oo ah kan had iyo jeer awoodda badan ee WhatsApp.
Mid ka mid ah barnaamijyada fariimaha degdegga ah ee ugu caansan uguna caansan ayaa ah Skype, taas oo nasiib darro sanadihii la soo dhaafay lumineysay sumcadda. Si kastaba ha noqotee, maanta wali waxay noqon kartaa beddelka xiisaha leh ee WhatsApp iyo in isticmaaleyaal badani u adeegsadaan nolol maalmeedkooda.
Samafalkiisa ugu weyni waa tayo aad u weyn oo ay bixiso marka la sameynayo wicitaannada fiidiyowga, taas oo dad badani geliyaan dhererka wicitaan kasta oo caadi ah, iyo suurtagalnimada dirista iyo helitaanka farriimaha.
Maanta waxay leedahay tiro badan oo isticmaaleyaal ah, heer ganacsi iyo nooca kumbuyuutarkooda, in kasta oo isticmaalkeeda aaladaha moobiilka sidoo kale si ballaadhan loo adeegsado.
Waxaa laga yaabaa in codsiga farriinta deg degga ah uusan adiga aqoon kuu lahayn WeChat laakiin hadda waxay leedahay in ka badan 600 milyan oo adeegsadayaal firfircoon adduunka oo dhan. Waa run in Spain iyo dalal kale oo badan wali si weyn looma oga, laakiin tirada badan ee isticmaaleyaasha ah ee ay haysato, ma seegi karno fursad aan ugu darno liiskan beddelka WhatsApp.
Marka la fiiriyo astaamaheeda, guushu waa ka qiil badan tahay waana sida kuwa kale oo badan waxay kuu ogolaaneysaa inaad dirto oo aad hesho farriimaha, laakiin sidoo kale samee wicitaanno fiidiyoow ah oo leh tayo sare leh iyo sidoo kale isticmaal arjiga iyada oo loo marayo mid ka mid ah noocyada badan ee la heli karo. Gunaanadkeedii ugu dambeeyay, waxaa caddeeyay Aaminaad, wax ay adeegsadayaal badani ku qancaan.
Waqtiga dalal badan ayaan u iman WeChat, laakiin waxaa laga yaabaa in cilladaha WhatsApp ay dhawaan ka dhigi doonto guul caalami ah waxaanan bilaabi doonnaa adeegsiga gees kasta.
Kahor intaan WhatsApp jirin, isticmaaleyaal badan ayaa horey u lahaa codsi fariin deg deg ah oo ku saabsan qalabkeena BlackBerry. Sidaad xaqiiq ahaan u ogtahay inaan ka hadlayno BlackBerry Messenger taas oo aan aad u sii fogeyn waxay ahayd adeeg ay isticmaali jireen boqollaal kun oo dad ah oo adduunka ku baahsan. Maalmahan, dhibaatada uu ku nool yahay BlackBerry iyo joogitaankiisa suuqa ee aan cidna ka baxsanayn, laakiin taasi kama dhigin in BBM ay ka baaba'do nolosheena.
Shirkadda Canadian-ka ah waxay isku dayday inay dhiirrigeliso adeeggan, in ka badan inta og qof walba, ayaa la bilaabay noocyada ma aha oo keliya qalabka BlackBerry, laakiin sidoo kale macruufka iyo Android halkaasoo ay ku gaareen guul yar.
BlackBerry Messenger waa codsi ka xiiso badan fariimaha deg dega ah ee isla markiiba, sida ku dhacday BlackBerry, waxaa la rumaysnaa inay ka badbaadi karto wax walba ama ku dhowaad wax kasta iyadoon la cusbooneysiin haba yaraatee. Hadda wuxuu isku dayayaa inuu mar kale naftiisa raadsado waxayna umuuqataa inuu guuleysanayo, waayo hadda waxay horeyba u qaadeen tallaabo wanaagsan BBM, taas oo beddel u ah WhatsApp isticmaalayaasha badan.
BBM - Mar dambe lama heli karo
Fikradda si xor ah
Maanta Waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo lagu beddelan karo WhatsApp oo ku yaal suuqa oo ka mid ah kuwa ugu kala duwan. Si kastaba ha noqotee, dhibaatadu maaha in la helo beddel kale oo si fiican u shaqeeya oo na siiya ikhtiyaarro iyo hawlo isku mid ah sida loo isticmaalo arjiga ay leedahay Facebook, laakiin halkii laga heli lahaa mid ay ku wada jiraan asxaabtayada, dadka na yaqaan ama xubnaha qoyska.
Xaaladdayda maalmo ka hor waxaan go'aansaday inaan ka tago WhatsApp, murugo weyn iyo hilow, si aan ugu dhaqaaqo Telegram. Wax cabasho ah kama qabo howlgalka WhatsApp, in kasta oo aanan rabin in la iga ganacsado xogteyda gaarka ah iyo tan shaqsiyadeed, maadaama dalabka ugu caansan adduunka ee la doonayo in la sameeyo. Aniga oo kale, hubaal waxaa jira kuwa kale oo badan, kuwaas oo waayi doona xiriirka dadka qaarkood, laakiin yaa xogtooda si ammaan ah ku heli doona.
Qaadashada tallaabada laga soo qaado WhatsApp ee loo maro codsi kale oo fariin deg deg ah haba yaraatee ma ahan mid naxdin leh sida dad badani aaminsan yihiin Oo waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo tayo sare leh oo xitaa ka fiican WhatsApp iyo inbadan oo isticmaaleyaal ah ayaa adeegsanaya dhowr codsi oo isku mar ah, si tartiib tartiib ah dhibaatooyinkaas oo ah kaliya helitaanka dadka qaar ee adeegga ay leedahay Facebook.
Maxay kuugu fiican tahay WhatsApp?.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » 7 beddelka WhatsApp ayaa si siman u wanaagsan ama ka fiican
Waxaan doortay viber maxaa yeelay halkan Latin America waxay leedahay taageerayaal badan,
Jawaab Rodolfo Hernandez
Heer Cusub oo loogu talagalay USB Type-C Audio oo la shaaciyey
Galaxy Note 7 wuxuu leeyahay tartame waana in qaar ka mid ah mashiinada dharka lagu dhaqo ee Samsung ay sidoo kale qarxaan iyagoon ogeysiis hore helin